"Ma caddaalad doon mise danley siyaasadeed"? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Cabdifataax Jaante
Mid kamid ah dadka wax ka abaabulaya dibadbaxyada ayaa BBC-da u sheegay in sababta ay dibadbaxa u dhigayaan ay tahay dhibaatooyinka heysta.
"In shacabka gobolka Banaadir ay codkooda gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed, beesha caalamka oo ay caddeeyaan dhibaatada heysato oo ay kamid tahay in aysan jirin xuquuqd dadka ay u baahan yihiin oo ay kamid tahay in aysan nabad jirin, in aysan jirin wado la maro oo haweenka waddooyinka ay ku dhalayaan, in aan la shaqeysan karin oo qaanuunka la iska dhaga tiray oo dadka la iska dilayo". Waxa sidaas BBC-da u sheegay Cabdi Farax oo kamid ah dadka wax ka abaabulayo dibadbaxyada la hadal hayo.
Salaad Cali Jeele oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya oo isna BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dowlada shisheeye iyo siyaasiyiin soomaali ah ay gadaal ka riixayaan dibadbaxyada la hadal hayo ee Muqdisho.
"Dowladda Imaaraatka waxaad ogtahay inay faragelin ku heyso dowladda Soomaaliya tan iyo markii dowladda ay go'aan dhexdhexaad ah ka qaadatay khilaafka dalalka Carabta, banaan baxaas waa mid barakaacyaasha lagu siinayo lacag oo lagu dhahayo laamiga fariista". Ayuu yiri Salaat Cali Jeele.
Hasa yeeshee hadalka Salaat Cali Jeel ayaa waxaa beeniyay Cabdi Farax oo kamid ah dadka wax ka abaabulayo dibadbaxyada Muqdisho, waxaana uu intaa raaciyay in si walba ay ula hadleen dowladda, taasi na ay shaqeyn weyday.
Muuqaalada aan la hubin ee tooska
Waxa saaka baraha bulshada qabsaday muuqaalo loo ekeysiiyay kuwa toos ah, balse la duubay dibadbaxii ay magaalada Muqdisho ka dhigeen darawalada Bajaajta dhowr maalmood kahor, taaas oo ay kaga ashtakoonayeen dilalka loo geysto.
Muuqaaladan ayaa dib loogu baahiyaya Facebook-ga, waxayna u muuqdeen kuwa lagu kicinayo dadka, laguna jahwareerinayo.
Garab istaaga cullimada Muqdisho ee dowladda
"Walaalayaal in dowlad sharci ah oo dalka si nidama ku maamusho lagu banaanbaxoo oo laga hor yimaado oo la muujiyo muqaalo diidma ah, iyo in dad siyaasiyiinta dowladdas mucaaradaya ay shacabka ka dhigtaan gabaad dana siyaasdaeed awgeed, Diin ahaan ma banaana". Sidaas waxaa warbaahinta dowladda ka sheegay sheekh Cali Wajiis.
Hasa yeeshee hadalka cullimada ayaa waxaa saluugay hogaamiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
"Waxaa maalmihii ina dhaafay warbaahinta laga hadalsiiyey dad la soo abaabulay oo magac culimo, siyaasi iyo odayaal ku hadlaya. Dadkaasi marna ka damqan wiilashii xoogsatada ahaa ee xaqdarida lagu dilay, shacabkii rasaasta lagu laayey markii ay ka mudaaharaadeen dilkii xaqdarida ahaa iyo ku dhowaad afartameeyadii wiil ee xabsiga la dhigay, iyagoo waxba galabsan. Waxaa taa ka sii daran in ilaa iyo haatan hal ruux oo gacan ku dhiigle dil geystay ah aan cadaalada la hor keenin".Ayuu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga.
Waxa kale oo uu inta raaciyay in xaq dastuuri ah ay tahay in muwaadinka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Muqdisho ay dareenkooda isku soo bax nabadeed ku cabiraan.
Ciidamada rabshadaha ka horataga
Warar aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay ciidamo soo dhoobtay isgoyska magaalada Muqdisho, si haddii ay wax dhacaan ay uga hortagaan.
Dhowr maalmood kahor ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dilalka loo geysto darawalada Bajaaj-ta, waxaana madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan dilalka.